Vopunduka nemadiridziro muchirimo | Kwayedza
Vopunduka nemadiridziro muchirimo
16 Aug, 2019 - 00:08	 2019-08-15T17:10:07+00:00 2019-08-16T00:00:19+00:00 0 Views
VARIMI makumi mana vekwaMambo Neuso, kuSanyati vopunduka nechirongwa chemadiridzo chekurima zvirimwa zvakasiyana munguva yose yegore vachitengesa.
Chirongwa ichi cheSeke Irrigation scheme chiri kuitwa kwaSabhuku Makwechere uye varimi ava vari kutora mvura yavo kubva mudhamu reSeke riri mudunhu iri.
Hurumende iri kukurudzira kushandiswa zvizere kwemadhamu ari kumativi mana enyika zvichitevera kusanduka kwemamiriro ekunze uko dzimwe nguva kuri kukonzera kuti mvura inaye iri shoma sezvakaitika mwaka wadarika.
Dunhu reSanyati, riri pakati pemamwe matunhu akasiyana munyika anowana mvura yekunaya yakaringana mumwaka wezhizha. Mumwe wevarimi vari muchirongwa ichi, Mai Lainah Manomano (50) vanoti vabudirira zvikuru nebhindauko remadiridziro iri.
“Muchirongwa chedu tine varimi 40 apo murimi woga-woga ane munda wakatandavara hekita imwechete. Mvura yedu inobva mudhamu reSeke umo inofamba nepamusoro pevhu ichiyerera yoga nemumigero. Hatina chatinoda kuti mvura iuye muminda medu, chedu kuvhurira mvura chete wotodiridza,” vanodaro.
Vanoti mvura yemudhamu ravo reSeke haiperi kubva apo rakavakwa makore makumi maviri akadarika.
Muminda iyi munorimwa zvirimwa munguva yose yegore zvinosanganisira chibage, maringazuva, mupunga, gorosi, mbambaira, muriwo, derere, hanyanisi, matomatisi madhumbe, bhinzi, nzimbe nemabutternut.
VaAmos Tongwani (34) avo vari muchirongwa chemadiridziro zvakare vanoti vanotenda Hurumende zvikuru nekuvavakira dhamu iri iro ravandudza hupenyu hwevagari vedunhu ravo.
“Kuno hatina nhamo kuburikidza neminda yemadiridziro iyi, tiri kuvaka dzimba dzakanaka zvikuru uye vana vari kuenda kuzvikoro zvinosanganisira zvebhodhingi. Zvirimwa zvedu tinoendesa kumisika yekuMutora kwaNembudziya, kuGandavaroyi, Arda, Kadoma, Harare, Chegutu nekumwe. Asi tine vanouya kuzotenga vanobva kunzvimbo dzekure dzakaita sekuBulawayo. Zvirimwa zvedu zvemuchirimo zvinotipa mari yakawanda kudarika muzhizha,” vanodaro.
Dambudziko ravo guru vanoti kushaya zvekutakurisa zvirimwa sezvo vemarori vanovadhurira zvikuru.
“Tine hurongwa hwekuunganidza mari kuti tizotengawo rori inotakura zvirimwa zvedu,” vanodaro.
VaWilliam Neuso (43) – avo vanove gurokota guru raMambo Neuso vari munyori zvakare – vanoti chirongwa chemadiridziro ichi ndechimwe chinoita kuti dunhu ravo rive nechiremerera zvikuru.
“Dhamu reSeke hariperi mvura kubva ravakwa rakatandavara makiromita 18 kuchizotiwo kupamhamha haikona,” vanodaro.
Mahekita 2 000 ezvirimwa akaparadzwa nea...24 Jan, 2020
Kurima howa kune mari24 Jan, 2020
Zvirimwa zvidiki ipundutso24 Jan, 2020